Western n'otu dị ka usoro ịkwụ ụgwọ | ECommerce ozi ọma
Western n'otu dị ka usoro ịkwụ ụgwọ
Kemgbe tupu ya adi ahia n'ịntanetị, Western Union arụ ọrụ dịka ụzọ dị mfe ma dị mfe iji nyefee ego ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo n'agbanyeghị agbanyeghị na enweghị mkpa kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ. Companylọ ọrụ a dị n'ihe karịrị mba 200 ma nwee ebe karịrị 500,000. N'agbanyeghị uru ndị a niile ọ dị obere ịchọta a azụmahịa n'ịntanetị nke na-enye usoro ịkwụ ụgwọ a na otutu ndi mmadu amaghi na ha nwere ike iji ihe a Nhọrọ dị ka usoro ịkwụ ụgwọ.
1 Kedu otu esi enyefe ego na ọrụ ọdịda anyanwụ?
1.1 Uru nke ichikota na Western Union:
1.2 Ọghọm nke ịkwụ ụgwọ na Western Union:
Kedu otu esi enyefe ego na ọrụ ọdịda anyanwụ?
Iji kwụọ ụgwọ onye ahịa gị debanye aha na ibe ahụ ma soro usoro iji zipu ego. Nwekwara ike ịga ụlọ ọrụ mpaghara wee kwụọ ụgwọ site na iji ụdị ego. Mbupu nke ruru 3005 euro nwere ike ịme. Mgbe e mesịrị ọ ga-enye gị a koodu na nke ị ị nwere ike ịtụtụrụ ego gị site na ụlọ akụ ma ọ bụ tinye ya na akaụntụ akụ gị.
Uru nke ichikota na Western Union:
Ọ bụ ụzọ nke ịbịakwute ndị ahịa na-enweghị ohere ịnweta a debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Azụmahịa dị na nkeji ma ọ bụ ọrụ dị n'ọtụtụ akụkụ ụwa, ọbụlagodi ndị na-enweghị nnweta ọzọ. usoro ịkwụ ụgwọ. Na mgbakwunye, enwere ike ịtụle ọnọdụ nke mbupu n'oge ọ bụla.
Ọghọm nke ịkwụ ụgwọ na Western Union:
Isslọrụ dị elu karịa ndị ọzọ ụzọ nkwụnye ụgwọ, na mgbakwunye na nke ọtụtụ ndị jirila uru nke usoro a ime wayo n'ihi ya, ị ga-anọrịrị na nkwukọrịta okwu n'etiti ndị na-ere ahịa na ndị ahịa. Ọ bụ usoro akwadoro naanị maka ịkwụ ụgwọ ndị na-adịchaghị obere, n'ihi na ọrụ ndị ahụ ga-adị oke ọnụ karịa otu ụgwọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Western n'otu dị ka usoro ịkwụ ụgwọ
Ndewo, onye bụ onye edemede nke akwụkwọ a na afọ ole ka ebipụtara?
Ihe dị iche n'etiti B2B na B2C
Etu ị ga - esi mara ma ụlọ ahịa gị n'ịntanetị dị njikere ịga mba ofesi